Kubbaa miilaa Addunyyaa 2026 fi magaalotaa U.S
Sadaasaa 01, 2021
Faayilii - Istaadiyamii Atlaantaa Bitootessa 11, 2018
Taphi Kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 irratti Xiyyeefata. Taphii kun biyyoottan Amerikaa kaabaa 3 keessatii taasifama. Seenaa tapha kubbaa miilaa Adduunyaa keessatti biyyoottan 3 yemuu keessumeesan inni kun isa jalqabaa ta’uuf deema.
U.S , Meekiskoo fi kanaadaatu keessumeessa. Magaalotii U.S 17 ni qopheesinaa jedhanii gaafii dhiheesaniiru. Akka karooraa Federeshiinii kubbaa miilaa Adduunyaa ti magaaloti taphichii keessati taasifamuu danda’u 10 hin caalu.
Kanaafuu magaalowaan ni keessumeesina jedhan dorgomsiisudhaan filachuun barbaachisaa ta’e. kanaaf jechuudhaan Fiifaan koree haanga’oota lama of keessa qabu qopheessee daawwanaa gochaa turan.
Marsaa tokkofaatti Waashingiteen Diisii dabalatee magaalotaa akka Niwu Yoork, Filaadeelfiyaa, Atlaantaa, Los anjeles faa daawwatee ture.
Magaalota hafan immoo torbee daebe kana ilaalaniiru. Kanneen keessaa magaala San firaansiskoo Bey Eeriyaa kutaa biyyaa Kaalifoorniyaa ti isa tokko. Naannoo kanatti Stadiyoomiin irraati xiyeefatame Stadiyoomii Levi’s jedhamuudhaa. Garaa daawwatoota 70,000 keessumeesuu danda’a jedhamee tilmaamama.
Magaalonnii yemmuu taphaawan kan keessumeesuudhaaf dorgoman caalaatti kan yaadan bu’aa inni fiduu danda’udha. Akkumaa kanaan haanga’oonni magaalotaa beey Eeriyaa yoo yarate bu’aa Doolara Miiliyoonii 300 irraa arggana jedhanii tilmaamaniiru.
Magaalli kan biroo daawwatame isa kutaa biyya Teeksaas keessatti argamu magaala Houstoni. Stadiyoomi daawwatoota 60,000 ol keessumeessu danda’u akka qaban kan ibsan kantiibaan Houston, magaalichii yoo taphaawan Fiifaa 6 keesumeessuu danda’e bu’aa Doolara biliiyoonaa 1 irraa arggachuu dandeenyaa jidhan.
Tapha biyyoottan addunyaa 48 kan irratti hirmaatan kana irrati qooda fudhachuudhaaf magaalotaa U.S barbaadan keessaa kaansaas sitiin isa tokko. Garee Fiifaa torbban daebbe daawwateeraa. Kaansaas sitiin magaalotan U.S caalbaasii keessa seenan keessaa magaala xiqoodha warren jedhaman keessaa isaa tokko . garuu akka xiinxaltoonni tilmaamanitti kaansaa sitiin yoo carraa taphaa keessumeessuu argate bu’aa doolaara miiliyoonii 620 irraa arggachuu da’ndaa jedhan.
Magaalli sinsinnatii isataadiyoomii daawwattootaa 60, 294 keessumeesuu danda’u qaba jechuudhaan dorgomii keessaa of galchee torban darbe koree fiifaatin daawwatameera.
Gareen prezidaantii itti aanaa Fiifaa Victor Montaglianiin hogganamu staadiyoomotaa gurguddaa daawwatee keessaa inni tokko kan magaalaa Deveri. Kutaa Biyya Koloraadoo. Stadiyoomiin isaanii daawwattoota 70,000 ol keessumeesuu danda’a.
Taphin kubbaa miilaa Adduunyaa namoottan bashanansiisuudhaa alatti barbaachisummaan isaa inni guddaan bu’aa diinagdeeti. Biyyoottan keessumeesanuuf qarshii hedduu fidaa. Akkauma kanaan taphi kubbaa milaa adduunyaa innii bara 2026 taasifamu biyyoottan keessumeesaniif bu’aa hanga Biiliyoonii 5 argachuu danda’u jedhamee ammumaanu tilmaamamaa jira.
Gareen Fifaa magaalotaa U.S madaalaa jiru murtoo isaa dhumaa jalqabaa bara haaraa as deemaa jiru keessaa ifa taasisa jedhamee eegama.
Magaalonni U.S dorgomaa jiran Atlanta, Baltimore, Boston, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/ New jersey, Orlando, Philadelphia , san Francisco, Bar area, Seattle fi Washington DC.
Kana keesaa magaalotaa caalbaasii moo’an ji’a dhufu boodaa isinitti himna.
Hogganoonni Amerikaa fi Tarkii Dubbatan
Walgahiin Jijjirama Qilleensaa Irratti Dubbatu Gaggeeffamaa Jira
Addunyaa irratti lakkoobsi namoota vaayrasii koronaan du'anii miliyoona 5 gahe
Sudaan Keessatti Mormiin Itti Fufee Jira
Ibsa Hoggantuun VOA murtii Abbaan Taayiyaa Miidiyaa Itoophiyaa laalchisee kennan